अल्लो व्यवसायको विविधीकरण
हाम्रो देश नेपाल जैविक विविधता, भौगोलिक विविधता, हिमाल, पहाड, भित्री मधेस, तराई–मधेस, जातीय विविधता, भाषिक विविधता, धार्मिक विविधता सरिसृप, उभयचर, जलचर, झ्याऊ, लेउ, फुल फुल्ने वनस्पति, जडीबुटी, अन्नपातलगायतमा नेपाल विश्वमै धनी देशमा गनिन्छ । त्यस्तै यहाँ सर्वसाधारण र गाउँले भाषामा भांग्रे सिस्नो भनिने वनस्पतिबारे केही लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा उपभोक्तावाद र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यास
व्यावसायिक संगठनको आधारभूमि समाज नै हो । व्यवसायको अस्तित्व समाज रहे मात्र रहन्छ अर्थात् व्यावसायिक संगठनहरूले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि समाजमै गर्छन् । समाजलाई आफ्नो नाफा आर्जन गर्नेदेखि सारा उद्देश्य पूरा गर्ने आधार व्यवसायले बनाएको हुन्छ । तसर्थ समाजप्रति व्यावसायिक संघ–संगठनहरूको अधिकदायित्व हुन्छ । व्यवसायले समाजमा रहेर उपभोक्ता, सरकार, कर्मचारी र आफैंप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्छ ।
सन् २०१८ जनवरीदेखि सुरु हुँदै आएको अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक तनाव मत्थर भएको देखिँदैन । बीचबीचमा उक्त दुई देशबीचको व्यापारिक तनाव कहिले साम्य होला–होला जस्तो त कहिले तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ । २०१९ को अगस्ट अन्तिमतिर सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने गरी पुनः अमेरिका र चीनबीच अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकी कर बढाएपश्चात् उक्त देशबीच व्यापारिक तनाव कम नभएको भन्न सकिन्छ । चीनले ७५ अर्ब डलरका अमेरिकी वस्तुमा भन्सार कर बढाउने भनिएपछि दुई देशबीच पुनः व्यापारिक तनाव चर्किएको बताइन्छ । चीनले यो कदम उठाएपछि २०१९ को अगस्टतिर अमेरिकाले सबै चिनियाँ वस्तु आयातमा थप ५ प्रतिशत भन्सार दर बढाउने भएको थियो । करिब ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका चिनियाँ सामानमा अतिरिक्त १५ प्रतिशत करवृद्धि गरिएको देखिन्छ ।
गएकोे दुई–चार दिनअगाडि सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानको हितलाई मध्यनजर गर्दै किसानहरूले उत्पादन गर्ने दूधको मूल्य थारै भए पनि वृद्धि गरेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुन्न र पढ्न पाउँदा खुसी लागेको छ । यो खुसीको खबरले केही हदसम्म जागरुक तथा उद्यमशील किसानहरूलाई थोरै भए पनि ऊर्जा थप्ने काम गरेको छ । समयसापेक्ष मूल्य समायोजन हुनु एउटा राम्रो पक्ष पनि हो, तर के बढेको मूल्यले दुग्ध उत्पादक किसानहरूको हातसम्म पुग्छ होला त ? दिन–रात नभनी मेहनत गरेका, पसिना बगाएका ती उद्यमशील दुग्ध उत्पादक किसानहरूमा पक्कै पनि वृद्धि भएको मूल्य पुग्न सक्दैन जस्तो लाग्छ ।
विकास–निर्माणको कार्यशैलीले गुणस्तरमा प्रश्न
गत असार महिनाको तेस्रो साता ४ अर्बका दरले विकास–निर्माणको खर्च भइरहेको समाचार सुनियो, पत्रपत्रिकामा देखियो । वरपर हेर्ने हो भने हतार–हतार बाटो पिच ढलान गर्ने, खानेपानी योजना सम्पन्न गर्ने, सिँचाइका कार्य तीव्र बनाउने लगायतका कार्यहरू भइरहेको देखियो । मानौं, साउनपछि त्यो कार्य गरिएमा आकाश नै खस्छ, ठूलै दण्डको भागीदार हुनुपर्छ झैं गरिन्छ ।
डब्लूटीओमा कृषिक्षेत्र उदारीकरणको मुद्दा
विश्व व्यापार संगठन स्थापनापूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुव्यवस्थित बनाउन ग्याटको आठौं राउन्ड उरुग्वेको पुन्टा डेल स्टेटमा सन् १९८६ मा सुरु भएको थियो । आठौं राउन्डमा उठान भएका मुद्दाहरूमाथि लगातार आठ वर्ष छलफल भएको थियो । सोही सिलसिलामा आर्थर डंकनको संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण भएको थियो । १५ अप्रिल १९९४ मा मराकसमा आर्थर डंकनले तयार पारेको मस्यौदा विश्वका १ सय २३ मुलुकद्वारा हस्ताक्षर भएको थियो जहाँ विश्व ग्याटलाई विश्व व्यापार संगठनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय हुनुका साथै कृषि, सेवा, टेक्सटाइल, व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति विश्व व्यापार संगठनमा समेट्ने निर्णय भएको थियो । सोअनुरुप १ जनवरी १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको विधिवत् रुपमा स्थापना हुन पुगेको थियो ।
नेपाल भिजिट–२०२० को सम्मुखमा छ । मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न र भ्रमण वर्ष मनाउनका लागि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाशिल संस्थाहरूले भिजिट नेपाल–२०२० लाई सफल बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका संघसंस्था भए पनि पर्यटन विकासका लागि प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा पर्यटनका लागि देशको संरचनाअनुरूप कार्य गरेको पाइँदैन ।
नेकपा डबलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भनेर चिनिएका ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई हालै मात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी कामको ठेक्का दिइयो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी भएकै कारण ठेकेदार अधिकारीले किन ठेक्का पाउन नहुने ? जबकि उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम दरमा ठेक्का सक्ने गरी बोलपत्र पेस गरेका छन् भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । सरसर्ती हेर्दा यो प्रतिक्रिया पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका सबै प्रक्रिया पूरा गराएकै छन् ।
नेपालको स्थानीय तह सबल भूमिकामा छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा संंवैधानिक हक, अधिकार सुनिश्चिताले स्थानीय तह सबल बनेको हो । विगतमा विकेन्द्रीकरण भनिए पनि स्थानीय निकायलाई केन्द्रीकरणले घाँटी थिचेको थियो । अहिले स्थानीय तहलाई संविधानमा नै अधिकार निक्षेपणसहित विकेन्द्रीकरणको अधिकार प्रदत्त भएकाले तिनले स्थानीय सरकारको पगरी गुथेका छन् । यसैले स्थानीय तहले सरकारको हैसियतमा नागरिकलाई न्यानो दिन सक्नुपर्छ ।
हिजो मात्र यस वर्षको ‘सुनिश्चित बालअधिकार : समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नारा बोकेर देशले बालदिवस मनायो । मीठा कुरा त भए, तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अभाव छ । सडक बालबालिकाको रोदनमा कारुणिक चित्कार खोलाको गीत बनिरहेको दृश्य आज एक्काइसौँ शताब्दीकै प्रताडना हो । आजको नेपालमा ६ लाख बालश्रमिक जोखिम मोलेर छाक टार्छन् । नेपालमा ५ वर्ष पहिलादेखि ७७ लाख ७० हजारमध्ये अभैm ४० प्रतिशत बालश्रमिकको दुर्दशा छिपेर बसेको छ ।
हामीलाई लागेको छ, सेयरको मूल्य बढे मात्र फाइदा हुन्छ । सेयर किनबेचमा होस् वा अन्य कुनै पनि व्यापारमा दुईवटा मूल्य हुन्छन्— खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य । नाफा वा घाटा हुनमा दुवै मूल्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । किनेको मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य बढी भए नाफा हुन्छ, तर नाफा गर्ने यो मात्र तरिका होइन । यदि हामीले खरिद वा लागत मूल्यलाई नै कम गर्न सक्यौं भने पनि नाफा कमाउन सकिन्छ । यसको अर्थ हो— मूल्य बढेर वा लागत घटाएर नाफा कमाउने भन्ने ।
सन् १९९० को दशकमा देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगहरू निजीकरण हुन थाले । त्यससँगै निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन थाले । यसै क्रममा देशमा गरिबी घटाउने, ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच बढाउनेजस्ता बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थापना भएको देखिन्छ । बिस्तारै संस्थाको संख्यामा वृद्घि हुँदै गयो र नयाँ–नयाँ संस्था स्थापनाका लागि दबाब पनि बढ्न थाल्यो । हाल नयाँ संस्था स्थापनाका लगि निवेदन लिने काम रोकिए पनि पहिले निवेदन दिएकाहरूलाई स्वीकृति दिनेकाम जारी छ ।